Faalo: Wali ma Iswaydiisay, Sababta Qurbo-joogtu Ugu Qulqulayaan Jijiga! – Rasaasa News
Jul 11, 2014 Is'waydiisay, Jijiga, Ma, Qulqulayaan, Qurbo-joogtu, Sababta, Ugu, Wali
Jijiga, July 11, 2014 – Atoobiya waxay ka mid tahay dalalka ugu fakhrisan dunida, xukuumada ka jirtana waa kalitalis cabudhis ku dhisan. Dimoqraatiyada ay sheegto waa mid aan waxba ka jirin oo warqadaha ugu qoran kaliya.
Culayska iyo caadiska xoriyad la,aaneed ee saaran dadwaynaha Atoobiya waa mid xad dhaaf a, gaar ahaan degaanka Somalida Ogadeeniya.
Atobiya kolkay ku fashilantay in ay xoog ku joojiso halganka xornimodoonka ee ay wado ONLF, waxay soo celis tabihii gumaysi ee hore ay ugu dhaqmi jireen xukuumadihii Atobiya.
Labo arimood oo ay isleedahay waad kaga guulaysan ONLF ayey xooga saartay sida;
a. Abuurida maleeshiyaad Somali ah oo tiro badan oo mushaar lagu hawlgaliyay. Kuwaas oo ay hawlgaliyaan saraakiil Tigray ah oo qaba haween Somali ah, Somaligana ku hadla. Arintan oo waligeedba ay Atobiya ku caana maali jirtay, way ku adkaatay in ay joojiso taageerada ONLF.
b. Abuurida dad qurba joog ah oo mushaar qaadata. Arintan oo ku cusub Somalida Ogadeeniya waxay Atobiya ku heshay daraasad, ka dib kolkii ay lacago waydiisteen kooxo la heshiiyay Atobiya oo khilaaf kaga tagay ONLF.
Atoobiya markiiba waxay bilowday in ay dhaqaale xoog leh oo lagu soo jiidanayo u leexiso Qurbo joogta, iyada oo yaraynaysa lacagihii horumarinta ee gali lahaa degaanka Somalida oo aad u dib dhacsan.
Madaxwaynaha Ismaamulka Somalida, ahna taliyaha maleeshiyada Liyuu Booliska, oo marar badan safar ku aaday dalalka galbeedka, wuxuu ku bixiyey kasbashada Qurba joogta Somalida malaayiin Dollar.
Sida ay sheegeen xogo aan ha helay Kilalka iyo qaar ka mid Xawaaladaha Somalida, madaxwaynahu safar kasta oos dibada ugu baxo wuxuu qaataa lacag saddex milyan oo doolar [US $3 million]. Lacagtaas oo lagu kasbado dad asalkoodu Somalida yahay ee ku nool dalalka reer galbeedka.
Dadka uu dibada kula kulmo madaxwayne Cabdi Iley, wuxuu u balan qaadaa in laga bixinayo tigidh iyo kharajka safarka lana soo dhawyn doono haday yimaadaan Jijiga. Waxaa kale oo loo balan qaadaa in la siin doono dhul iyo hanti ay ku dhistaan haday joogaan labo sano Jijiga. Arintaasi waxay soo jiidataa Somali badan oo aan u dhalan gabalka, oo si khaldan loogu bixiyo miisaaniyada horumarinta.
Saraakiil Atoobiyaan ah, waxaa laga soo xigtay, waanu la soconaa in ay si xun u baxdo miisaaniyada degaanku. Laakiin waxaanu waxwalba uga aamusnnaa in dalka la keenayo dad ONLF hore u taageeri jiray.
Xogo rasmi ah oo aan ka helay Jaaliyaada dibadu waxay noo sheegeen in ay qaataan mushaar xubnaha Jaaliyaadka dibada ee taageera Kilalka. Xubnaha Jaaliyaadka ee mushaarka qaata iskamawarhayaan, mid walbana si gooni ah ayaa dhabarka looga taabtaa.
Waxaa kale oo jira xubno xisbiyiin ah iyo kuwa Liyuu Boolis ah oo mid waliba gaarkiis warbixinta ugu tabiyo Madaxwayne Cabdi Iley.
Jaaliyaadka mushaarka qaata waxaa ka mida; Ingriiska, Maraykanka, Denmark, Australia iyo Dubai.
Jaaliyada Sweden ee SEDYO, oo iyadu dhawaan tagtay Jijiga, ayuu madaxwaynuhu u balan qaaday in loo bilaabi doono mushaarka. Waxaa kale oo uu sheegay in wixii hada ka dambeeya aan Jaaliyaadka yimaada kharajka jiifka iyo cuntada laga caawin doonin.
Uma baahna Jawaab in ONLF, Atoobiya culays xoog leh ku hayso, kuna kaliftay in ay mushaar u qorto qurba joogta ka soo jeeda gabalka. Saarkiisha Atobiya ayaa lagu xaman jiray in ayna jeclayn in colaada Ogaden ay istaagto, sababo dhaqaale awgood. Haatan waxaa iman in Qurbajoogtu xogaha degaanka u soo tabiyaan ONLF, si mushaaradu ugu socoto.
Waxaa iswaydiin leh Atoobiya intee in la egg ay sii wadi lacagan baytimaalka ah ee ay dadwaynaha degaanku ka baahan yihiin?
Warbaahinta Dalka Kenya Iyo Dilalka Gaarisa?